Archives Sheekada Guusha - Magazine Nidaamka Baradhada
Ugu weyn Madaxa Sheekada Guusha
Qeybta "Sheekada Guusha", bogga internetka ee majaladda "Nidaamka Baradhada" ayaa si caadiya u daabacda agabyada ku saabsan shirkadaha ay hawlahoodu la xiriiraan koritaanka baradhada. Laakiin maanta ...
Warshaddu waxay diiradda saareysaa soo saarista shiilannada Faransiiska iyo jilicsanaanta. Awoodda naqshadeynta - 20 kun tan oo ah alaabooyin dhammaaday ...
Si rasmi ah, Chipsiyada loo yaqaan 'Pringles chips' waxaa loo yaqaanaa cookies muddo dheer, maadaama maadada baradho ee ku jirta ay yar tahay - kaliya 42%, inta soo hartayna waa bur ...
Magacaygu waa Adril Setlik iyo baradhada ayaa ah dalaga ugu weyn ee qoyskaygu soo korayay muddo ka badan 60 sano. Nasiib darrose, ...
Qeybta "Sheekooyinka Guusha", qeybta internetka ee joornaalka "Nidaamka baradhada" ayaa daabacda sheekooyin ku saabsan shirkadaha baradhada barasha ee Ruushka, iyo sidoo kale kuwa dhow iyo kuwa fogba, ...
17-kii Luulyo, ayaa baradho ka soo go'ay beerta gaarka loo leeyahay ee Kuznetsov (tuulada Shushenskoye, Krasnoyarsk Territory). Beerku waxa uu korayay baradhada 10 sano. IN ...
Cinwaanka "Sheekada Guusha", bogga internetka ee joornaalka "Nidaamka baradhada" wuxuu daabacaa sheekooyin ku saabsan shirkadaha baradho baradhada ee Ruushka, ...
Saddex sano hadda, Amil LLC waxay ka shaqeyneysay Gobolka Nizhny Novgorod, oo ah shirkad wax soo saare ka sameysa iskutallaabta casriyeysan, oo si wada jir ah looga abuuray caanka Swedishka ...
Qeybta ugu weyn ee wax soo saarka baradhada iyo khudradda ee beeraha Ruushka ee AFG National waxay ku taalaa Gobolka Nizhny Novgorod. Beeraha Nizhny Novgorod ee qayb ka ah ...